စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 7:21:00 AM
I really like the way(style) you write. (kinda ironic. huh?)
Thu Nov 30, 09:57:00 AM 2006
chit ma ma thaw,
I like this post. Carry On... :-*
Thu Nov 30, 08:41:00 PM 2006
Fri Dec 01, 07:06:00 PM 2006
တထိုင်ထဲနဲ့ အရင်ကပို့စ်ပါ ဖတ်ပစ်လိုက်တယ်.။။။
Sat Dec 02, 10:50:00 PM 2006
မီးသော်ကြီးရေးတဲ့စာတွေ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ၊ ဖတ်ရင်းနဲ့ ပြုံးမိတယ် …
ဗဟုသုတတွေလဲ ရပါရဲ့ …။
ရန်ကုန်ဘဆွေစာအုပ်ထဲကလို့ ၀န်ခံထားတာလေးကိုတွေ့လို့ မီးသော်ကြီးရဲ့ ရိုးသားမှုကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ မပြောလဲ ဘယ်သူသိမှာလဲနော် .. ။ ဒီစာအုပ်နဲ့ မနီးစပ်ဖူးဆိုရင်ပေါ့။
မီးသော်ကြီးအရေးအသားနဲ့ ပေးထားတဲ့နာမည် “ရေသည်မမ” ဆိုတာနဲ့လဲ လိုက်ဖက်ညီပါ့ပေ့။
အသစ်တွေဆက်ရေးပါအုံး .. သော်ရေ …. ပျင်းမနေနဲ့နော် …
Mon Dec 04, 02:02:00 PM 2006
If you don't know , you bypass it
Get Yangoncity FM Radio toolbar. Written partly using Burmese true-blue Unicode font.(Of course, not like in the one used in this blog-sub/non standard private font)
Tue Jan 30, 05:16:00 AM 2007
Sun Sep 02, 10:14:00 PM 2007